Nihomehezan’ny Olona Ireo Tomponandraikitra ao Tajikistan Mangataka Amin’ny Wikipedia Hanitsy Ireo ‘Tsipelina Diso’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Oktobra 2017 6:12 GMT
Fampidirana momba an'i Emomali Rakhmon, mpifehy an'i Tajikistàna, ao amin'ny Wikipedia amin'ny fiteny Tajik.
Mikaroka izay hampitomboana ny lazany ho sahala amin'ny lehilahy sarontsarotiny, mankamamy ny filaminan'i tranony, ny filohan'i Tajikistàna, Emomali Rakhmon, hany ka tsy mahagaga raha notefotefohan'ilay kaomity tsy refesi-mandidy momba ny teny ao amin'ilay firenena Aziatika Afovoany ny Wikipedia noho ireo fanononana diso amin'ireo fampidirana amin'ny fiteny Tajik. Tsy azon'ireto mpiasam-panjakana fa izy ireo ihany dia afaka manitsy ireo hadisoana ireo, na koa tena kamo izy ireo hanao izany, mety tsy hahagaga ihany koa.
#Tajikistan urges Wikipedia to correct Tajik content – apparently unaware it could do it itself v @RFERLhttps://t.co/sATv38xSs4
Manainga ny Wikipedia i #Tajikistan mba hanitsy ny votoaty Tajik – toa tsy fantany fa afaka manao izany na dia izy ihany aza @RFERLhttps://t.co/sATv38xSs4
Tamin'ny 2012 no nisy ny ady tena mendrika ny ho tadidiana indrindra nataon'i Tajikistàna tamin'ny media vaovao, rehefa nampiantso an'i Mark Zuckerberg, tompon'ny Facebook, ny olona ambony iray mba hihaona aminy “mandritra ny ora fivohan'ny birao”. Nosakanan'ny governemanta ny Facebook noho ny nahitana “lainga sy fanendrikendrehana” naelin'ireo vondrona mpanohitra tamin'izany fotoana.
Ankehitriny indray, ny “messenger” no tifirin'ireo Tajik tomponandraikitra tamin'ity indray mitoraka ity, noho ireo fahadisoana amin'ny tsipelina lazaina fa nataon'ireo mpandray anjara ao amin'ny rakipahalalana an-tserasera. Tamin'ny 2 Oktobra, nilaza ny komity ofisialy misahana ny fiteny, Saodatsho Matrobiyon, fa “tsy maintsy ahitsy” ireo diso, raha tsy izay dia mety hiharan'ny lalàna Tajik ny Wikipedia.
Ibrohimjon Rustamov, Tajik iray monina ao Etazonia izay mpitahiry mavitrika sady mpanoratra ao amin'ny Wikipedia no niantso ilay fanambaràna ho “tsy misy dikany” tao amin'ny tafatafa iray ho an'ny RFE/RL:
Maimaim-poana sady ho an'ny rehetra ny [Wikipedia], vondrom-piarahamonina erantany no mamoaka an'io, matetika tsy mitonona anarana. Hadalàna ny fangatahana famoahana avy aminà loharano iray izay azon'ny olona rehetra avoaka, anisan'izany ireo komity manam-pahaizana manokana momba ny fiteny ao Tajikistan.
Nanamarika ihany koa ny tatitry ny RFE'RL:
Tany aloha tany, ny komity mikasika ny fiteny, dia nampitandrina ireo mpandraharaha sy andrim-panjakana an-jatony maro manerana ny firenena mba hanitsy na hanova ireo anarany araka ny lalàna mifehy ny tenim-pirenena ao Tajikistan. Ampolony ireo “mpandika lalàna” no niharan'ny sazy ara-pitantanana, anisan'izany ny sazy fandoavana vola..
Araka ny voalazan'ireo antontanisa farany, manakaiky ny 70.000 ireo lahatsoratra Wikipedia amin'ny teny Tajik. Io no vokatry ny asa mafy nataon'ireo mpikatroka toa an'i Rustamov, izay neken'i Rakhmon sy ireo mpiasam-panjakana Tajik hafa tany aloha tany. Tsy mazava – ankoatran'ireo hadisoana vitsivitsy – izay antony nahatonga ilay fivadihankevitra tampoka.
Saingy ny fanoheran'ny komity dia mifandraika amin'ny fironana mankany amin'ny famoronana politika tsisy vidiny ao anaty repoblika ahitàna mponina 8,5 tapitrisa. Tamin'ny volana lasa teo ny governemanta dia namoaka ireo toromarika mandràra ireo “fikiakiahàna mafy” sy ireo fifaty mainty miaraka amin'ny zavatra hafa amin'ny fandevenana ao an-toerana, raha terena kosa tsy maintsy hiakanjoan'ireo vehivavy manamboninahitra, ireo mpampianatra ary ireo mpianatra, ny akanjo nasionaly nandritra ny iray volana tany am-piandohan'ity taona ity.
Miditra anatin'ny ivon'ny fiainana andavanandro ny fameperana tahàka izany satria i Tajikistan mijaly noho ny krizy ara-toekarena lalimpaka mifamatotra amin'ny famokarana zara raha misy ao anatiny sy ny fihenàn'ny famindrana vola alefan'ireo teratany mpila ravinahitra efa ho maherin'ny iray tapitrisa miasa any Rosia.
Ireo olana tena manandanja ireo – hamafisin'ny kolikoly mahazatra sy ny kiantranoantrano – dia olana toa tsy ahitàna valiny avy amin'ny fitondrana mihitsy.